पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा डा. गोविन्द पोखरेल-NepalKanoon.com
पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा डा. गोविन्द पोखरेल
साउन २९, काठमाडौँ । सरकारको हिजो बसेको बैठकले ऊर्जा अर्थतन्त्रमा पिएचडी गरेका डा। गोविन्द पोखरेललाई राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रामशरण महत, वामदेव गौतम,कृपासुर शेर्पा र नारायण खडकालाई सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
प्युठान जिल्लाको रास्पुरकोटमा जन्मेका पोखरेलले जर्मनीको फ्लेन्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट सन् १९९७ मा ग्रामीण ऊर्जा प्रविधि तथा सीप विस्तारमा स्नातकोत्तर र सोही विश्वविद्यालयबाट सन् २००४ मा ‘ऊर्जा अर्थतन्त्र र नीति’ विषयमा विद्यावारिधी गरेका थिए।
भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुलाई पुननिर्माण गर्नका लागि स्थापना गर्न लागेको शक्तिशाली पुननिर्माण प्राधिकरणको छुट्टै ऐनबाट निर्देशन हुनेछ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब सात सय अर्ब रुपैयाँको बजेट चलाउन पाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यमा भने डा तारानिधि भट्टराई नियुक्त भएका छन्। उनले भूगर्भशास्त्रमा जापानको क्यूसु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका हुन्। त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा भट्टराई विगत २५ वर्षदेखि क्याम्पसको भूगर्भशास्त्र विभागमा कार्यरत छन्।